प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भयो यस्तो बोल्ड सहमति, अब के गर्लान् प्रचण्ड र माधव नेपाल ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भयो यस्तो बोल्ड सहमति, अब के गर्लान् प्रचण्ड र माधव नेपाल ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना ‘दूत’ प्रतिपक्षी दलका नेताको निवासमा पठाएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको दुरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले दूत पठाएर सम्वाद प्रारम्भ गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरु प्रतिपक्षी नेता ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका देउवाले सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेका हुन् ।